Fraport Boka: Mari inowanikwa uye purofiti yakakwira zvakanyanya mumwedzi mipfumbamwe ya2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Fraport Boka: Mari inowanikwa uye purofiti yakakwira zvakanyanya mumwedzi mipfumbamwe ya2021
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Fraport Boka: Mari inowanikwa uye purofiti yakakwira zvakanyanya mumwedzi mipfumbamwe ya2021.
Yakasimudzirwa nekudzoreredza kunoonekwa mukufamba kwezororo mumwaka wezhizha, mari yakakwira muchikamu chechitatu cha2021 ne79.5 muzana kusvika € 633.8 miriyoni zvichienzaniswa ne353.1 miriyoni mukota imwe chete muna 2020.
Kudzoreredzwa kwemutyairi wendege kunotungamira mukukura kwakasimba kwemari mumwedzi 9 yekutanga ya2021.
Kudiwa kwekufamba kwezororo mukati memwedzi yechirimo kwakanga kwakasimba zvikuru.
Mhedzisiro yave nani nekuda kwemuripo wemari wakatambirwa wekurasikirwa kwedenda kwakaitika panhandare dzendege dzeBoka dzakasiyana.
Kambani yeFraport yepasi rose airport yakawana kuwedzera kukuru kwemari uye mhedzisiro yeBoka (net purofiti) mukati mechikamu chechitatu nemwedzi mipfumbamwe yekutanga (yakapera Gunyana 30) yegore rebhizinesi ra2021. Zvinhu zvakakonzera kuwedzera uku zvinosanganisira kushanda kwakanaka kwekuita uye akati wandei-imwe mhedzisiro. Kufanotaura kwemwaka wechando unouya kunewo tariro. Naizvozvo, Fraport yakagadziridza maonero ayo egore rose emari uye mamwe makiyi emari akakwira zvishoma. Kusimukira kwetraffic paFrankfurt Airport kunofungidzirwa kuti kuchasvika pamusoro penzvimbo inotarisirwa kuita, pakati pevatambi vari pasi pemamiriyoni makumi maviri kusvika makumi maviri nemashanu.
Fraport Mukuru mukuru, Dr. Stefan Schulte, vakatsanangura kuti: “Tichitevera kurasikirwa kukuru kwakaitika muna 2020 uye kukwira kwakanyanya kwechikwereti, tave kuona tarisiro yakajeka iri mberi. Kudiwa kwekufamba kwezororo mukati memwedzi yechirimo kwakanga kwakasimba zvikuru. Zvakare, mhedzisiro yedu yave nani nekuda kwemuripo wemari wakagamuchirwa nekuda kwekurasikirwa kwedenda kwakaitika panhandare dzendege dzeBoka dzakasiyana. Ikozvino, isu tiri kutarisirawo intercontinental traffic kuti idzoke zvishoma nezvishoma - ichitsigirwa nekuvhurwazve kwazvino kwemiganhu yeUS. Naizvozvo, tine tarisiro yakati wandei pamusoro pemwaka wechando kupfuura zvataiva mwedzi mishoma yapfuura. Zvakadaro, ichiri chinhambwe kumberi kudzamara tasvika padanho rekupfuura nedenda zvakare uye takwanisa kuderedza chikwereti chedu zvakanyanya. "
Chikamu chechitatu: mari uye purofiti inokura zvakanyanya
Yakasimudzwa nekudzoreredza kunoonekwa mukufamba kwezororo mumwaka wezhizha, mari yakakwira muchikamu chechitatu cha2021 ne79.5 muzana kusvika € 633.8 miriyoni zvichienzaniswa ne353.1 miriyoni mukota imwe chete muna 2020 (zvese hunhu hwakagadziridzwa kune IFRIC gumi nemaviri kondirakiti. mari kubva kuvaka uye kuwedzera matanho pa Fraport's subsidiaries pasi rose). EBITDA yakakwira kusvika €288.6 miriyoni muchikamu chechitatu, kubva paminus €250.3 miriyoni muQ3/2020. Nekudaro, bhenefiti iyi inoratidzawo akati wandei-anobva mhedzisiro: Muchikamu chechitatu cha2020, mihoro yakakanganiswa nekusikwa kwezvipo zvematanho ekudzikisa-vashandi anosvika 279.5 miriyoni. Gore rino, mupiro wakanaka muchikamu chechitatu wakabva muripo wakanangana neCCIDIDS kune vatinoshanda navo muUS, Slovenia neGreece - iyo yakawedzera "Imwe Income" yeBoka nemamiriyoni makumi matatu emadhora. Kugadziridza kune aya ega-off mhedzisiro, Fraport ichiri kutumira kukura kwakasimba kweEBITDA kwe785.6 muzana kusvika €258.6 miriyoni muchikamu chechitatu cha2021, maringe ne29.2 miriyoni panguva imwe chete gore rapfuura. Mhedzisiro yeBoka - kana purofiti - yakakura kusvika € 102.6 miriyoni muQ3/2021 (kusanganisira yambotaurwa-imwe mhedzisiro), zvichienzaniswa nekubvisa €305.8 miriyoni muQ3/2020.
Mwedzi mipfumbamwe yekutanga ya2021: Fraport inowana yakasimba kushanda mhedzisiro, inotsigirwa neakanaka-anobva mamhedzisiro
Mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore razvino, mari yeBoka yakakwira ne18.3 muzana gore-pa-gore kusvika ingangoita bhiriyoni 1.4 (tisingasanganisire IFRIC 12 mhedzisiro). Pamwe chete nekukura kwevatyairi kunze kweFrankfurt, mari yakaitwa yakakanganiswa nechibvumirano chakaitwa muchikamu chekutanga cha2021 pakati peFraport neGerman Federal Police (Bundespolizei) yemuhoro wekuchengetedzwa kwendege kwakapihwa naFraport kare. Chibvumirano ichi chakawedzera mari ye57.8 miriyoni. Mimwe mhedzisiro yakave nemhedzisiro yakanaka padivi remari: Izvi zvaisanganisira muripo kubva kuhurumende dzeGerman neHurumende yeHesse yakapihwa Fraport kuchengetedza kugadzirira kushanda kweFrankfurt Airport panguva yekuvhara, pamwe nemubhadharo wedenda kune vanotsigirwa neBoka muGreece, the US neSlovenia - iyo yakapa huwandu hwe275.1 miriyoni kuFraport's "Imwe Mari". Zvakasanganiswa nemubhadharo wemubairo kubva kuGerman Federal Police, izvi zvisingadzokororwe zvakapa huwandu hwe332.9 miriyoni kune imwe mari, inoenderana nemhedzisiro yakanaka pamhedzisiro yekushandisa (EBITDA).
Dan Pimental Strategy anoti:
November 10, 2021 pa 08: 37
MuBioenergy yedu & Rimwe bhizinesi rakawana mihoro yakakwira zvakanyanya zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo. Ndakanakidzwa chaizvo nekuverenga kwayo positi iyi zvakakwana kuti nditsvage kunyora ichi chakanakisa chinyorwa uye chinobatsira positi ndatenda nekugovana.